Saka isu tinogona kugovera iCloud yekuchengetedza muIOS 11 | IPhone nhau
Saka isu tinogona kugovera iCloud yekuchengetedza muIOS 11
Icho chaive chimwe chezvinhu izvo Apple isina kana kumbotarisa mune yekupedzisira Keynote mharidzo yeIOS 11, asi zvakadaro chiri chinhu icho vashandisi vanga vachikumbira kwenguva yakareba. Okay isu tinofanirwa kubhadhara kuti tiwedzere izvo zviyero 5GB yeICloud yekuchengetedza izvo zvinoshomeka kune chero munhu, asi kuti iwe unobhadharira imwe yekuwedzera uye haugone kuigovana nevamwe vashandisi mumhuri yako chimwe chinhu chaive chiri kutochema kudenga.
IOS 11 mamiriro aya achazopera, kubvira Apple ichakubvumidza iwe kugovera yako iCloud yekuchengetedza nenhengo dzeboka rako «En Familia». Nenzira iyi, sevhisi iyi iyo kusvika parizvino ichikubvumidza iwe kuti ugovane zvaunotenga zveTunes, gadzira maakaundi evana vadiki uye unosvika kumatanhatu maApple Apple maakaundi e € 6 chete, izvozvi zvakare ichakubvumidza iwe kubvumirana kusvika ku14,99TGB yekuchengetedzwa kwepamhepo kwega 2, € 9,99 pamwedzi uye igovana nayo nenhengo dzese dzeboka.
Hatizive zvimwe zvakawanda, nekuti Apple haina kutaura chero chinhu nezvazvo, asi muIOS 11 yatotibvumidza kuwana iyo iCloud yekugadzika uye nekugovana yedu yekuchengetera nekusunda kwebhatani. Parizvino yakagovaniswa en bloc, haugone kugovera "zvikamu" zvekuchengetedza kune wega mushandisi, asi isu tese tinowedzera izvo zvatakatora. Kubva pazvirongwa iwe unogona kuona izvo mushandisi wega wega anogara muICloud, asi pasina dzimwe sarudzo dzekumisikidza. Mubhawa ine mavara mazhinji inoratidzira kuti ndeapi mafaera nzvimbo inogarwa, iwe uchaona izvo vamwe vese vemhuri yako vanogara mune grey (1 na2).
Pane mibvunzo yakawanda yekupindura, asi isu tichafanirwa kuvaona sekufamba kwemazuva uye anotevera maBetas anoonekwa. Tinogona here pakupedzisira kugovana Mapikicha atakachengeta muICloud chero watinoda? Tinogona here kuisa miganho pane dzimwe nhengo kuitira kuti iCloud yedu isazadze nemifananidzo yavo nemavhidhiyo kubva kuWhatsApp?
Vandudza: Sekureva kwevaverengi vedu isu takaudzwa, uye tinokwanisa zvakare kuona muzvirongwa zvemutengo zveApple, izvo chete zve200Gb uye 2Tb zvinoenderana neiyi nyowani yeMhuri Kugovana sarudzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Saka isu tinogona kugovera iCloud yekuchengetedza muIOS 11
Jonatan Ramirez Ledesma akadaro
Ndine beta senge iwe yawakaisa uye haina kunditendera kuti ndigovane chirongwa chekuchengetedza. share nemhuri haioneke kwandiri, unoziva nei?
Pindura kuna Jonatan Ramirez Ledesma
Ini zvakare ndine beta yakaiswa uye mugove nemhuri hauratidzike, unoziva here chingave chiri nekuda kwe?
Ini zvakare ndine beta yakaiswa asi ini handiwani mugove pamwe nesarudzo yemhuri uye ini ndine 50gb chirongwa
Inongowanikwa chete nezvirongwa zvinopfuura 200GB
Iyo nyowani iOS 11 Chikamu chekuchengetedza chinotibatsira kusunungura nzvimbo yemuno pane yedu iPhone kana iPad
Isu tinowana makumi matanhatu neshanu maficha eIOS 64